Tafaverina tamin’ny Fihaonamben’ny Global Voices Niaraka Tamin’ny Hevi-baovao Hianatra Fiteny Vaovao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Desambra 2017 14:34 GMT
Tany am-piandohan'ny volana Desambra, nody aho rehefa avy namonjy ny Fihaonambe izay nokarakarain'ny Global Voices tao Colombo, Sri Lanka. Nandika (amin'ny ankapobeny) lahatsoratra avy amin'ny teny Anglisy ho amin'ny teny Frantsay nandritra ny 3 taona sy tapany aho, ary sambany tafahaona mivantana tamin'ireo mpikambana sasany, tahaka ireo mpanoratra maro izay efa nadikako ny lahatsorany. Sarobidy ny fahafahako nisaotra azy ireo mivantana
Vokatr'izany: rehefa mametraka ireo olona rehetra ireo amin'ny efitra iray ianao, dia tsy azonao heverina fa mahay teny anglisy avokoa ny rehetra. Raha ny marina, dia mety tsy mitovy lingua franca izahay (ohatra, miteny anglisy aho fa tsy Espaniôla, izay metimety kokoa, sy manaja kokoa). Ary na dia eo anivon'ireo izay afaka miteny na mahatakatra ny teny anglisy aza, miovaova be ny hafainganam-piteny.
Gwenaëlle Lefeuvre dia tonian-dahatsoratra ato amin'ny Global Voices Lingua Frantsay. Farmasiana, mpandihy, bilaogera izy, ary mpiaro fiteny vitsy an'isa ao amin'ny Academie Du Gallo.. Azonao atao ny manaraka azy ao amin'ny Twitter @DiffractedWord.